Umbandamu kubantu. izimpawu ukutheleleka
Umbandamu yisifo sesikhumba engatholakala kokubili abantu futhi izilwane, futhi kusukela lapho kukhona ukutheleleka. izifo ezithathelana kulula, kodwa inqubo yokwelapha lide kakhulu.
Zokwelapha, eyaziwa ngokuthi "ezimise okwama-tile" kuhlanganisa ezinye izinhlobo dermatoses. Imbangela yale kwezinso kukhona amagciwane athile, amagciwane athile kanye nesikhunta encanyana. Umbandamu kubantu, izimpawu zazo axhomeke uhlobo ukutheleleka, ukuqubuka livela, okuyinto eqoqwe in a nezimagqabhagqabha zibe maholoholo. Izimpawu zesifo kungenzeka ezincane Izigaxana pruritic. Ngezinye izikhathi lesi sifo kubonakala ngesimo izilonda ukuvuvukala.
ngokuvamile Lesi sifo inamagquma futhi iyingozi. Pathology singazelele zifa, futhi ingakha inkathi ngokwanele eside - ezinyangeni ezimbalwa.
Umbandamu kubantu, izimpawu zazo ziyabonakala ipuleti nail, nenhloko, lungisani isikhumba, okubangwa ukutheleleka amagciwane kule izinwele. Ibizwa ngokuthi Trichophyton antropofilnymi. Isici esiyinhloko lolu hlobo ulele kukhona zibe maholoholo pink nezimagqabhagqabha, zibe maholoholo elimhlophe-grey umbala. Esikhathini ukutheleleka lesion kungabonakala nasemkhakheni izinwele thinning futhi aphulwa ezilinganisweni zabo. Iziguli zinamathuba ukulunywa futhi Ukuwohloka impilo siyenzeka.
ulele ezahlukene zenzeka kubantu. Pink, isibonelo, ikhulela focus olulodwa. Umnyombo zokugula elalisanda kumiswa ngokuhamba kwesikhathi iqala ikhasi off izindawo kanye yellowing. Khona-ke, phakathi nenkathi ehlala njalo izinsuku ezimbalwa, zikhona emaphaketheni entsha emathangeni, esifubeni kanye emahlombe. Sinenkosi uhlobo izilongotshane encane. Isiguli kulokhu kukhona ukuluma. Lokhu zokugula kwabangela yileli gciwane le-herpes, okuqondene uhlobo lwesikhombisa.
Emibalabala (pityriasis) versicolor kubantu, izimpawu okungase obonwa zibe maholoholo izindawo ukuthi abe umngcele ecacile futhi ababethi umbala omhlophe noma iba nsundu ngokubomvu, ngokuvamile ngenxa ukungalingani hormone. Against isizinda sofuba, Cushing Syndrome, isifo sikashukela, umdlavuza noma ukukhulelwa lokhu zokugula uhlobo olukhethekile ukhunta - Pityrosporum ovale. Kulokhu, lesi sifo ngocansi kalula ngokusebenzisa isiguli noma impahla yakhe.
Amashingili kubantu kabani izimpawu ziyabonakala isimo okunomkhuhlane, izinhlungu zekhanda ezinamandla, ukuvuvukala isikhumba kanye Ukuwohloka impilo kungase kube umphumela nokucindezeleka okungapheli ukukhathala, Oncology nezinkinga ukuzivikela mzimba zomzimba. Lokhu zokugula is ukusebenza okubangwa yileli gciwane Herpes zoster, okuyinto inomphumela omubi empilweni ezinzwa. Nge ezimise okwama-tile esifubeni umuntu kokuba ukuqubuka vesicular, egcwele okuqukethwe ecacile. Ngemva kwesikhathi esithile, lezi izimila ibuna, inqubo yabo uyaxebuka iqala. Lokhu kunciphisa ubuthi jikelele we umzimba, iyancipha ubuhlungu syndromes.
Flat (obomvu) ukuphuca umuntu ogama isithombe ozibona ngezansi, livela lwamafinyila ulwelwesi, izinzipho, isikhumba. Sici Its main kuyinto Izigaxana ne core ecindezelekile. Lapho obomvu ezimise okwama-tile nesineke ekhononda ka ukulunywa ezinzima. Ububanzi lolu hlobo zokugula - emakhwapheni, esiswini ephansi, ibhodi lemisindo, emuva indololwane amajika.
Ngaso sonke isikhathi khumbula ukuthi herpes - isifo esithathelanayo. Kule ndaba, lapho ivela khona futhi esolwa isifo kufanele ngokushesha uthintane wesikhumba.
Esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe ngegciwane emathunjini ezinganeni nakubantu abadala?
Ukwahlukanisa futhi isinyathelo nomfutho wegazi ophezulu
Ukwelashwa nokuvikelwa conjunctivitis e abadala kanye nezingane
Yini okufanele ngiyenze uma isikrini sami TV nisishiye siboshwé ngebhande ovundlile?
River Garden Residence 4 *, 5 * (Turkey / Belek) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Black Walnut: isicelo futhi ewusizo izakhiwo
Reflex Gag ezinganeni nakubantu abadala. Izimbangela Nezingozi amakhambi
Ushukela: izakhiwo, caloric
Ugcwalise omakhelwane ngezansi: yini okufanele uyenze? umonakalo
Egiept, Tiran Island 4: Izibuyekezo nezithombe zezivakashi